သတင်း – Media9
ဆယ်လီ ပြည်တွင်း သတင်း အနုပညာ
August 25, 2020 media9Comment(0)
Zawgyi “မေန႔ကလိုပဲသူငယ္ခ်င္း ဇာတ္လမ္းတြဲမွာဆုိရင္ သြန္းစႏၵာဆုိတဲ့ေကာင္မေလးေပါ့ေနာ္ အဲ့ဒီေနရာမွာဆုိရင္ ပရိသတ္က အသည္းတယားယားနဲ႔ၾကည့္ရမယ္ ဒီေကာင္မေလးကဘယ္လိုလဲေပါ့ စိတ္ပဲဆုိးရေတာ့မလုိလုိ …..” ျခဴးပန္းႏြယ္ #media9 #chuepannwe Unicode “မနေ့ကလိုပဲသူငယ်ချင်း ဇာတ်လမ်းတွဲမှာဆိုရင် သွန်းစန္ဒာဆိုတဲ့ကောင်မလေးပေါ့နော် အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင် ပရိသတ်က အသည်းတယားယားနဲ့ကြည့်ရမယ် ဒီကောင်မလေးကဘယ်လိုလဲပေါ့ စိတ်ပဲဆိုးရတော့မလိုလို …..” ခြူးပန်းနွယ် #media9 #chuepannwe
ကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူမှာချစ်သူရှိတယ် သီချင်းလေးဆိုဖြစ်ခဲ့ပုံ‌ကိုပြောပြခဲ့တဲ့ jkစံ
August 25, 2020 August 25, 2020 media9Comment(0)
Zawgyi “ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္တဲ့သူမွာခ်စ္သူရွိတယ္ သီခ်င္းေလးဆုိျဖစ္ခဲ့ပံု jkစံ “သီခ်င္းရဲ႕တစ္ပုဒ္လံုးအခ်ံဳက အပိုင္ရမွအခ်စ္လုိ႔မျမင္ပါဘူးကြယ္ဆုိတဲ့ဟာေပါ့ေနာ္ အဲ့ဒီတုန္းကမွတ္မွတ္ရရ ေနာက္ဆံုးမွတီးတဲ့တစ္ပုဒ္ပဲ ေနာက္ဆံုးမွေတးေရးက အဲ့ဒီမွာကၽြန္ေတာ့္အသံၾကားဖူးတာ ဒီသီခ်င္းက သူကိုယ္တုိင္ဆုိမယ္ေပါ့လုပ္ထားတဲ့သီခ်င္း”…..jkစံ #Media9 #jkစံ Unicode “ကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူမှာချစ်သူရှိတယ် သီချင်းလေးဆိုဖြစ်ခဲ့ပုံ jkစံ “သီချင်းရဲ့တစ်ပုဒ်လုံးအချုံက အပိုင်ရမှအချစ်လို့မမြင်ပါဘူးကွယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော် အဲ့ဒီတုန်းကမှတ်မှတ်ရရ နောက်ဆုံးမှတီးတဲ့တစ်ပုဒ်ပဲ နောက်ဆုံးမှတေးရေးက အဲ့ဒီမှာကျွန်တော့်အသံကြားဖူးတာ ဒီသီချင်းက သူကိုယ်တိုင်ဆိုမယ်ပေါ့လုပ်ထားတဲ့သီချင်း” …..jkစံ #Media9 #jkစံ
“သူငယ်ချင်းဆိုတာပေါတယ် မိတ်ဆွေစစ်ဆိုတာရှားတယ်” ဆိုတဲ့ချယ်ရီသင်း
Zawgyi ေခတ္ဘယ္ေလာက္မွီမွီရည္းစားထားတဲ့ကိစၥမ်ိဳးေတြက်ရင္ေပၚေပၚထင္ထင္မေနေစခ်င္ဘူး “သူငယ္ခ်င္း အခ်င္းခ်င္းအဆင္မေျပတာမ်ိဳးဆုိရင္ လိုင္းေပၚတင္ၿပီးတုိက္ခုိက္တာမ်ိဳးေတြ ဒါမ်ိဳးကမလုပ္သင့္ဘူး လုပ္ေနရင္ခဏပဲစိတ္ခ်မ္းသာရတာေနာ္ ဥပမာ မိနး္ကေလးဆုိပိုဆုိးတယ္ ဥပမာ ကိုယ့္ရည္းစားက တျခားေကာင္မေလးနဲ႔ႀကိဳက္သြားလို႔ ၿခံခုန္တာေပါ့ေနာ္ ဒါကိုSSေတြရိုက္ၿပီးတင္တာမ်ိဳးေတြ ဒါလုပ္ရင္ဘယ္သူနစ္နာမလဲ မိန္းကေလးပဲနစ္နာမယ္ ….”ခ်ယ္ရီသင္း #Media9 #ခ်ယ္ရီသင္း Unicode ခေတ်ဘယ်လောက်မှီမှီရည်းစားထားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကျရင်ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မနေစေချင်ဘူး “သူငယ်ချင်း အချင်းချင်းအဆင်မပြေတာမျိုးဆိုရင် လိုင်းပေါ်တင်ပြီးတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေ ဒါမျိုးကမလုပ်သင့်ဘူး လုပ်နေရင်ခဏပဲစိတ်ချမ်းသာရတာနော် ဥပမာ မိန်းကလေးဆိုပိုဆိုးတယ် ဥပမာ ကိုယ့်ရည်းစားက တခြားကောင်မလေးနဲ့ကြိုက်သွားလို့ ခြံခုန်တာပေါ့နော် ဒါကိုSSတွေရိုက်ပြီးတင်တာမျိုးတွေ ဒါလုပ်ရင်ဘယ်သူနစ်နာမလဲ မိန်းကလေးပဲနစ်နာမယ် ….”ချယ်ရီသင်း #Media9 #ချယ်ရီသင်း
ပြည်တွင်း လူမှုဘဝ သတင်း အနုပညာ
August 19, 2020 media9Comment(0)
Zawgyi ” ညဘက္ ပြဲေတာင္မစေသးဘူး တီးၾကမႈတ္ၾကတဲ့အခ်ိန္ေလးပဲရွိေသးတယ္ အုန္းအုန္းအုန္းနဲ႔ေရာက္လာၿပီး သိမ္းသိမ္းသိမ္း ထြက္ေျပး ဆိုၿပီး …….. -ေအာက္ေျခပိုင္းကိုသူတို႔မျမင္ၾကဘူး တစ္ခ်ိဳ႕ဇာတ္သမေလးေတြဆိုရင္ တစ္ညမွ သုံးေလးငါးေထာင္ပဲရတာရွိတယ္ …. – ပြဲကခြင့္ေတြေတာင္းၾကတယ္ ဒီအခ်ိန္မွာပြဲကခြင့္ေတာင္းေတာ့ ဘာထူးမွာလဲတဲ့ ဇာတ္သမားေလးေတြ ထမင္းစားရမယ္ေလ သူမ်ားအတြက္ၾကည့္ေပးသင့္တယ္ေလ …. ” #Media9 #ခ်စ္စု ” ညဘက် ပွဲတောင်မစသေးဘူး တီးကြမှုတ်ကြတဲ့အချိန်လေးပဲရှိသေးတယ် အုန်းအုန်းအုန်းနဲ့ရောက်လာပြီး သိမ်းသိမ်းသိမ်း ထွက်ပြေး ဆိုပြီး …….. -အောက်ခြေပိုင်းကိုသူတို့မမြင်ကြဘူး တစ်ချို့ဇာတ်သမလေးတွေဆိုရင် တစ်ညမှ သုံးလေးငါးထောင်ပဲရတာရှိတယ် …. – ပွဲကခွင့်တွေတောင်းကြတယ် ဒီအချိန်မှာပွဲကခွင့်တောင်းတော့ ဘာထူးမှာလဲတဲ့ ဇာတ်သမားလေးတွေ ထမင်းစားရမယ်လေ သူများအတွက်ကြည့်ပေးသင့်တယ်လေ …. ” #Media9 #ချစ်စု
ပြည်တွင်း လူမှုဘဝ သတင်း
အိမ်အကူမိန်းကလေးရဲ့အသက်ကို ၂၂နှစ်လို့ပဲ စွပ်စွဲနေတယ်လို့ပြောလာတဲ့ ဒေါ်သင်းသင်းခိုင်
Zawgyi အိမ္အကူမိန္းကေလးရဲ႕အသက္ကို ၂၂ႏွစ္လုိ႔ပဲ စြပ္စြဲေနတယ္လုိ႔ေျပာလာတဲ့ ေဒၚသင္းသင္းခုိင္ “ေမြးေန႔သကၠရာဇ္တုိ႔ ေျပာတယ္ ကိုယ္ကေတာ့ဗမာစာလည္းမတက္ အဂၤလိပ္စာလည္းမတက္ဘူး သူတုိ႔ကေတာ့ေျပာၾကတာ ၂၂တုိ႔ ေျပာတယ္ ကိုယ္ေမြးထားတဲ့သားသမီးပဲ သိတာေပါ့ ၂၂ႏွစ္မရွိဘူးေလ ကေလးက သူတုိ႔ကိုပို႔ေတာ့ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ပဲရွိေသးတယ္ သူအဓမၼျပဳက်င့္တာ ၁၃ႏွစ္ေလာက္မွာျပဳက်င့္တာ …..” ေဒၚသင္းသင္းခုိင္(အိမ္အကူမိန္းကေလးမိခင္) #media9 #ေဒၚသင္းသင္းခုိင္ Unicode အိမ်အကူမိန်းကလေးရဲ့အသက်ကို ၂၂နှစ်လို့ပဲ စွပ်စွဲနေတယ်လို့ပြောလာတဲ့ ဒေါ်သင်းသင်းခိုင် “မွေးနေ့သက္ကရာဇ်တို့ ပြောတယ် ကိုယ်ကတော့ဗမာစာလည်းမတက် အင်္ဂလိပ်စာလည်းမတက်ဘူး သူတို့ကတော့ပြောကြတာ ၂၂တို့ ပြောတယ် ကိုယ်မွေးထားတဲ့သားသမီးပဲ သိတာပေါ့ ၂၂နှစ်မရှိဘူးလေ ကလေးက သူတို့ကိုပို့တော့ ဆယ်နှစ်ကျော်ကျော်ပဲရှိသေးတယ် သူအဓမ္မပြုကျင့်တာ ၁၃နှစ်လောက်မှာပြုကျင့်တာ …..” ဒေါ်သင်းသင်းခိုင်(အိမ်အကူမိန်းကလေးမိခင်) #media9 #ဒေါ်သင်းသင်းခိုင်
ပြည်တွင်း သတင်း အမေးအဖြေ
“မင်းရာဇာကိုချုပ် ရက်ရှည်အောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး'” လို့ပြောတဲ့ ရှေ့နေကြီးရောဘတ်စန်းအောင်
Zawgyi မင္းရာဇာကိုခ်ဳပ္ရက္ရွည္ေအာင္လုပ္ေနတာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ေျပာတဲ့ေရွ႕ေနႀကီးေရာဘတ္စန္းေအာင္ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကစြပ္စြဲခံရသူေတြကိုခ်ဳပ္ရက္တာရွည္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ခ်င္တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘူးဆုိတာသိေစခ်င္တာပါ အခုဆုိရင္ ၂နာရီကေန ဆက္စစ္လုိ႔ရေသးတယ္ ေျမာက္ဥကၠလာမွာရံုးခ်ိန္းရွိလို႔ဆုိၿပီး ရံုးခ်ိန္းေတာင္းတာ ဘယ္အမႈလည္းဆုိတာေျပာမသြားဘူး ဒီေန႔စစ္မယ္ဆုိရင္စစ္လုိ႔ရတယ္ အခုမွ၂နာရီမခဲြေသးဘူး …..”.ေရွ႕ေနႀကီး ေရာဘတ္စန္းေအာင္ #media9 #ေရာဘတ္စန္းေအာင္ Unicode မင်းရာဇာကိုချုပ်ရက်ရှည်အောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့ရှေ့နေကြီးရောဘတ်စန်းအောင် “ကျွန်တော်တို့ကစွပ်စွဲခံရသူတွေကိုချုပ်ရက်တာရှည်အောင်ဆောင်ရွက်ချင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိစေချင်တာပါ အခုဆိုရင် ၂နာရီကနေ ဆက်စစ်လို့ရသေးတယ် မြောက်ဥက္ကလာမှာရုံးချိန်းရှိလို့ဆိုပြီး ရုံးချိန်းတောင်းတာ ဘယ်အမှုလည်းဆိုတာပြောမသွားဘူး ဒီနေ့စစ်မယ်ဆိုရင်စစ်လို့ရတယ် အခုမှ၂နာရီမခွဲသေးဘူး …..”.ရှေ့နေကြီး ရောဘတ်စန်းအောင် #media9 #ရောဘတ်စန်းအောင်
ဆယ်လီ ပြည်တွင်း သတင်း အမေးအဖြေ
Zawgyi “အေမတို႔ေခတ္က သံုးႏွစ္သံုးမိုး ဆုိတဲ့ အေမေဒၚႏြဲ႕ႏြဲ႕စန္း” အတည္ၾကံၾကတာ တုိ႔ေခတ္တုန္းက တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကိုၾကိဳက္ရင္ အတည္ကိုႀကိဳက္ၿပီးကရတာ အတည္ႀကံတာ ေက်ာင္းသားေတြကလည္း အေပ်ာ္ႀကံၿပီး ဖ်က္လို႔ဖ်က္ဆီးအေပ်ာ္မဟုတ္ဘူး မင္းသမီးကိုပိုးလို႔ရရင္ယူမယ္ အဲ့ဒီလို အတည္ႀကံၿပီးကၾကတဲ့ေခတ္ အေမတို႔ေခတ္က … ဒီေခတ္က်ေတာ့ အခုျမင္အခုႀကိဳက္အခုလုိက္ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ရစရာမရွိဘူး ….. ေဒၚႏြဲ႕ႏြဲ႕စန္း #Media9 #ေဒၚႏြဲ႕ႏြဲ႕စန္း Unicode “အမေတို့ခေတ်က သုံးနှစ်သုံးမိုး ဆိုတဲ့ အမေဒေါ်နွဲ့နွဲ့စန်း” အတည်ကြံကြတာ တို့ခေတ်တုန်းက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကိုကြိုက်ရင် အတည်ကိုကြိုက်ပြီးကရတာ အတည်ကြံတာ ကျောင်းသားတွေကလည်း အပျော်ကြံပြီး ဖျက်လို့ဖျက်ဆီးအပျော်မဟုတ်ဘူး မင်းသမီးကိုပိုးလို့ရရင်ယူမယ် အဲ့ဒီလို အတည်ကြံပြီးကကြတဲ့ခေတ် အမေတို့ခေတ်က … ဒီခေတ်ကျတော့ အခုမြင်အခုကြိုက်အခုလိုက် ချစ်သူများနေ့ရစရာမရှိဘူး ….. ဒေါ်နွဲ့နွဲ့စန်း #Media9 #ဒေါ်နွဲ့နွဲ့စန်း
ဆယ်လီ ပြည်တွင်း သတင်း
August 19, 2020 August 19, 2020 media9Comment(0)
Zawgyi “ခ႐ုိင္တရားရံုးက ခ်စ္သုေ၀နဲ႔ဦးေဇာ္၀င္းတုိ႔အမႈကိုပယ္လုိက္” ခ်စ္သုေ၀အေကာင့္ပိုင္ရွင္ ေဒၚခ်စ္သုေ၀နဲ႔ေဇာ္၀င္းအေကာင့္ပိုင္ရွင္ ဦးေဇာ္၀င္းတုိ႔ကို ဗုဒၶဘာသာကိုေစာ္ကားတဲ့ပံုေတြ အင္တာနက္ေပၚမွာျဖန္႔တဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွာဦးတုိက္ေလွ်ာက္ခဲ့တယ္ ရဲကိုစံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး စစ္ေဆးခ်က္မွာ မွန္တယ္လုိ႔ရဲကေဖာ္ျပလုိက္ေပမဲ့ ၂၃၃အရအမႈအားခြဲဆြဲရမွာကိုေပါင္းဆြဲ ထားတယ္ဆုိၿပီးအဓိကပယ္လုိက္တာေပါ့ #media9 #ဦးေအးပိုင္ Unicode “ခရိုင်တရားရုံးက ချစ်သုဝေနဲ့ဦးဇော်ဝင်းတို့အမှုကိုပယ်လိုက်” ချစ်သုဝေအကောင့်ပိုင်ရှင် ဒေါ်ချစ်သုဝေနဲ့ဇော်ဝင်းအကောင့်ပိုင်ရှင် ဦးဇော်ဝင်းတို့ကို ဗုဒ္ဓဘာသာကိုစော်ကားတဲ့ပုံတွေ အင်တာနက်ပေါ်မှာဖြန့်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ မြို့နယ်တရားရုံးမှာဦးတိုက်လျှောက်ခဲ့တယ် ရဲကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး စစ်ဆေးချက်မှာ မှန်တယ်လို့ရဲကဖော်ပြလိုက်ပေမဲ့ ၂၃၃အရအမှုအားခွဲဆွဲရမှာကိုပေါင်းဆွဲ ထားတယ်ဆိုပြီးအဓိကပယ်လိုက်တာပေါ့ #media9 #ဦးအေးပိုင်
Zawgyi လူတစ္ေယာက္ကိုယံုၾကည္ၿပီးခ်စ္ဖုိ႔ဆုိတာ လန္႔ေနရတဲ့အေနအထားျဖစ္သြားၿပီဆုိတဲ့ အိစိေကြး #media9 #EisiKway Unicode လူတစ်ယောက်ကိုယုံကြည်ပြီးချစ်ဖို့ဆိုတာ လန့်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ အိစိကွေး #media9 #EisiKway
Zawgyi အိမ့္ခ်စ္ရဲ႕ ဂ်ပန္၀တ္စံုေလး၀တ္ရတဲ့ခံစားခ်က္ #Media9 #EaintChit Unicode အိမ့်ချစ်ရဲ့ ဂျပန်ဝတ်စုံလေးဝတ်ရတဲ့ခံစားချက် #Media9 #EaintChit